ရှညောသား: March 2015
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, March 29, 20150comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အညာသားလက်ရာ ထိုင်း Green curry
ချက်ကျွေးတုန်းကမှတ်ထားတဲ့နည်းပါ။နည်းဆိုတာထက် ready made ဟင်းအနှစ်ထုပ်ကိုသုံးပြီးချက်
စာရေးသူ ရှညောသား at Thursday, March 19, 20152comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Tuesday, March 17, 20150comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, March 13, 20150comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
တပေါင်းလရဲ့ သင်္ကေတ ပေါက်ပွင့်
အချိန်လည်းဖြစ်သည်။ရွာထဲမှာအလှူ များရှိပြီဆိုမှဖြင့်အလှူ မတိုင်ခင်ကတည်းကမျှော်ရမောရသည်က
အလုပ်တစ်ခု။ဆိုင်းတွေမင်းသမီးတွေဘိသိတ်တွေနဲ့စည်စည်ကားကားလှူ ကြသည့်အလှူ မို့ပွဲကြည့်ဖို့
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, March 08, 20152comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook